Eedeysanayaal ajnabi ah oo looga yeeray Maxkamadda G/ Banaadir | KEYDMEDIA ONLINE
Eedeysanayaal ajnabi ah oo looga yeeray Maxkamadda G/ Banaadir
Maxamadda Gobolka Banaadir ayaa sida qorshuhu yahay 29-ka bishaan oo ku beegan Sabtiga soo socda u fariisan doonta dhageysiga dacwo ciqaabeed ka dhan ah eedeeysanayaal ajaanib ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Fadaraalka Soomaaliya, ayaa markii labaad Warbaahinta qaranka ka baahisay ogaysiis, ku socda eedeysanayaal gaarya lix ruux oo dhamaantood loo heysto faafinta xogaha amniga qaranka Soomaaliya.
Waraaq ka soo baxaday Maxakamdda Gobolka Banaadir 15-kii bishii la soo dhaafay ee April ayaa eedeysanayaasha kala ah; Rashid Abdi, Matt Brydan, Robison Colin, Rahman Rage Khaire, Emmanuel Deisser iyo David Hopkins, la ogaysiiyay in ay hor yimaadaan Maxakamadda.
Mar kale, ayaa dhawaan la baahiyay isla waraaqdii, waxaana lagu yiri, war kooban oo lagu qoray warfaafinta Dowladda, “Waxaa mar labaad la ogaysiinayaa eedaysanayaasha ku qoran warqada in dacwada ciqaabta ah ee loo haysto la dhagaysan doono maalinta sabtida ah ee ay taariikhdu tahay 29/05/2021 kiiskaasina uu ka furmi doono Maxkamadda Gobolka Banaadir”.
Rashid Cabdi, oo ah mid ka mid ah labada shaqsi ee ugu miisaanka culus eedeysanayaasha, ayaa hore u sheegay in isaga iyo Cilmi-baara-yasha kale ee Xarunta Cilmi-baarista Sahan, aysan galin eedeymaha basaasnimada iyo faafinta sirta Qaranka Soomaaliya ee loo heysto.
Raggaan ayaa ku mideysan Xarunta Cilmi-baarista Sahan, Dowladda Fadaraalka Soomaaliya ayaana hore uga mamnuucday dalka, kadib markii Falanqeeyaha reer Canada Matt Bryden, agaasimaha Sahan Research, uu u sheegay Washington Post, in Dowladda Soomaaliya oo faragelin xoogan ku heyso Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka.
Sahan Research, waa Xarun cilmi-baaris oo diiradda saarta khilaafaadka gobolka, amniga iyo dib u heshiisiinta. Waxay xafiisyo ku leedahay Nairobi, iyo London, halka Muqdisho laga mamnuucay, waxay diiradda saartaa Geeska Afrika waxayna daabacdaa warbixino ku saabsan amniga, xaaladda siyaasadeed iyo dhismaha nabadda.
Kaliya labo maalin ayaa ka dhiman xilliga loo qabtay in ay soo xaaadiraan Maxakamadda, waxaana la filayaa in aysan ka soo hor muuqan doonin, Maxakamadduna go’aan ka gaari donoto iyaga oo maqane ah.